Abbootiin qabeenya carraa hojiirratti dhalaoottta naannawaatif dursa kennuu qabu
Abbootiin qabeenya carraa hojiirratti dhalaoottta naannawaatif dursa kennuu qabu Featured
Aantummaan abbootii qabeenyaa hojii qabatamaan mul'achuu qaba
Babal’inni investimentii guddina biyya tokkootiif murteessaadha. Keessumaa biyyoota akka biyya keenyaa mootummaa misoomawaan bultuuf investimentiin bakka guddaa qaba.
Biyya keenyatti sirna mootummoota darbanii keessatti namni dhuunfaan hangamuu yoo qabaate kaappitaala qarshii kuma 500 ol qabaachuu hindanda’u ture. Yeroo ammaa garuu namni fedhii misoomaa qabu kaappitaala barbaadeen naannoo fedhetti hojii investimentii fedherratti hirmaatee qabeenya hanga danda'e horachuuf mirga guutuu qaba.
Safartuun misoomaafi guddinaa misooma bu’uuraalee misoomaafi qarshii investeroonni muraasni tuullatan qofa osoo hintaane jijjiirama jireenya hawaasaarratti galmaa’e dabalata.
Hunda ol biyya sirna federaalaatiin bultu, Itoophiyaatti siyaasniifi dinagdee jabaan hundeedhaan kan lafa qabatu yoo hirmaannaan ummataa cime qofa. Hojiin hirmaannaa hawaasaa malee namoota muraasa qofaan dalagamu fedhiifi faayidaa hawaasicha kabachsiisuu dhiisuu mala.
Akkuma, “Waa malee manni hinaaru,” jedhamu san anis waanan kana kaasefan qaba. Kunis yeroo ammaa investeroonni tokko tokko osoo Oromiyaa keessatti hojjetaa jiranii rakkoo hoji dhabdummaa naannichaatiif gurraa kennuu dhabuusaaniiti.
Bara darbe rakkoo bulchiinsa gaariifi sassaabdummaa kiraatiin walqabatee jeequmsa uumamee tureen balaa guddaa kan keessummeessan bu’aalee investimentii ta’uun kan dagatamu miti.
Badii dalagame kana keessatti warshaan tokko balleessaa isa kaanirraa ammoo badiin qolataa turuun ni yaadatama. Asirratti badiin bara darbe uumame bifa kamiinuu kan fudhatama qabu ta’uu baatus abbummaafi fayyadamummaan ummataa dagatamuusaatiin balaan dhaqqabe akka tures hubachuun barbaachisaadha.
Kun ammoo haaromsa gad fagootiin dhimmoota adda ba’an keessaa isa tokko ture. Investimentiin naannoo tokko keessatti taasifamu namoota dhuunfaafi biyya jijjiiruuf akkuma yaadu hawaasa naannoos jijjiiruun yookiin fayyadamoo taasisuun dirqama.
Haa ta’u malee, haala qabatamaa yeroo ammaa naannoo Oromiyaa bakkawwan tokko tokko keessatti mul’atuun osoo dargaggoonni naannoo hojii fedhanii hojjetaa bakka biroo fiduun ittuma fufeera.
Tarii hojjettoota ga’umsa qabu dhabuun ni mala ta’a. Garuu ilaalchi sirriin jiraannaan bakka hojiittuu ga’umsa horachuun waan danda’amuuf dargaggoota kunneen hirmaachisuun ni danda’ama. Kun osoo kana ta’ee jiruu hoji dhabdoota moggaatti dhiibuun calaqqisaa jira.
Ejensiin Wabii Nyaataafi Carraa Hojii Uumuu Oromiyaas yaaduma kana dhugoomse. Akka ejensichaatti investeroota hedduutu naannichatti argama. Hoji dhabdoonnis akkuma kana. Sababiinsaas investeroonni tokko tokko akkuma bara darbee hoji dhabdoota naannichaa hirmaachisaa hinjiran kaa.
Ejensichi bara bajataa kanatti namoota miliyoona tokkoof carraa hojii uumuuf hojjetaa jira. Garuu kanneen hojii barbaadan lakkoosa kanatti dacha lama ta’u. Osoo hoji dhabaatti karri cufamuu aantummaa ummataa eeguun gowwummaadha.
Osoo ollaan ofii beela hamaa keessa jiruu quufanii nagaan jireenya gaggeessuun rakkisaadha. Kaafuu, ollaan hojjetee akka of danda’uuf kakaasuu, haga of danda’utti deggersa barbaachisu taasisuudha malee.
Kana jechuun ammoo warshaan tokko hojii dhabaa hunda haa keessummeessu jechuu miti, bu’aaf hojjeta waan ta’eef. Gita hojii barbaadurratti namoota bakka biraarraa fiduurra hojjettoota naannawatti maayii ba’uutu irraa eegama. Gochi akkasii kun qajeelfama investimentii ta’uun alatti sochii mootummaan hoji dhabdummaaf taasisu keessatti shoora guddaa taphata.
Walumaagalatti, investeroonni aantummaa ummataa argachuufis ta’e hoj dhabdummaa hir’isuu keessatti kutannoon mootummaa cina dhaabbachuu qabu. Investeroonni bu’aa investimentiisaaniirraa ummata naannawaa dhandhamachiisan akkuma jiran kanneen ummatatti karra cufanis ni jiru. Kanaafuu, abbootiin qabeenyaa aantummaa ummtaaf qaban gochaan agasiisuu qabu. Kanas hawaasa naannawaatiif carraa hojiirratti dursa kennuun mirkaneessuu qabu.
Torban kana/This_Week 43227
Guyyaa mara/All_Days 1468007